IDOZI BACKGROUND INTELLIGENT NYEFEE SERVICE NA-EFU ỌRỤ - ADỤ
Idozi Background Intelligent Nyefee Service Na-efu ọrụ
Idozi Ofufe Intelligent Nyefee Service Na-efu ọrụ: Ọ bụrụ na ị na-eche nsogbu na Windows melite ma ọ bụ ịnweghị ike imelite Windows ma ọ bụrụ na ị nwere ike imelite Windows ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịbụ onye nwere nkwarụ ma ọ bụ kwụsị ọrụ. Nwelite Windows dabere na Ọrụ Nnyefe Ntanetị Ntanetị (BITS) nke na-arụ ọrụ dị ka onye nbudata ihe nbudata maka ya, mana ọ bụrụ na arụ ọrụ ahụ nwere nkwarụ mgbe ahụ Windows update agaghị arụ ọrụ. Ugbu a, ihe kachasị pụta ìhè bụ iji mee ka BIT si na windo ọrụ, ma ọ bụ ebe ahụ ka ọ na-adọrọ mmasị, groundlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ntanetị Ntanetị (BITS) enweghị ebe ọ bụla na windo service.msc.
Ọfọn, nke ahụ bụ ihe dị ịtụnanya dịka BITS dị na PC ọ bụla na ndabara ma ọ nweghị ụzọ ọ nwere ike isi pụọ na Windows. Enwere ike ibute nke a n'ihi malware ma ọ bụ ọrịa nje nke nwere ike ihichapụ BITS na PC gị kpamkpam ma ọ bụrụ na ị gbalịa ịgba ọsọ Windows Update ị ga-enweta koodu njehie 80246008. Agbanyeghị, na-egbughị oge ọ bụla ka anyị hụ otu esi edozi Izizi Ntuzi Ntuzi Ọrụ Na-efu site na ọrụ site na enyemaka nke usoro nchọpụta nsogbu edepụtara n'okpuru.
Usoro 1: Re-Register BITS
Usoro 2: Re-Debanye aha faịlụ DLL
Usoro 3: Gbaa Microsoft Fixit Ngwá Ọrụ
Usoro 4: Gbaa Checker File Checker
Usoro 5: Gbaa DISM
Usoro 6: Ndozi ndekọ
1.Pịa Windows Key + X wee họrọ Nye iwu ozugbo (Admin).
Pịnye iwu na-eso n'ime cmd wee pịa Tinye:
sc kee BITS binpath = c: windo system32 svchost.exe - k netsvcs start = egbu oge-akpaaka
3.Exit cmd na reboot PC gị ịchekwa mgbanwe.
4.Pịa Windows Key + R pịnye Ọrụ.msc wee pịa Tinye.
5.Chota BITS na pịa abụọ na ya, jide n'aka na ịtọ ụdị mmalite Akpaaka wee pịa Malite.
6.Pịa Mee sochiri OK.
7.Tụgharịa PC gị iji chekwaa mgbanwe ma hụ ma ị nwere ike Idozi Background Intelligent Nyefee Service Na-efu si ọrụ window.
windows 10 kọmputa na-ehi ụra mgbe 1 nkeji
Pịnye iwu na-esote otu n'otu wee pịa Tinye mgbe nke ọ bụla gasịrị:
3.Once e mechara iwu ahụ ọzọ gbalịa ịmalite ọrụ BITS.
4.Rụgharịa PC gị ka ịchekwaa mgbanwe.
Mgbe ụfọdụ, ọtụtụ nsogbu nwere ike ịzọpụta naanị site n'ịgba ọsọ Microsft Fixit dị ka ọ nwere ike idozi nsogbu ahụ wee mezie ya n'ezie. Ọ bụrụ na Fixit enweghị ike Idozi Background Intelligent Nyefee Service Na-efu si ọrụ window nke ahụ enweghị nchekasị, gaa n'ihu na-esote usoro.
Usoro 4: Gbaa System File Checker
1.Pịa Windows Key + X wee pịa Nye iwu ozugbo (Admin).
1.Pịa Windows Key + X ma họrọ Command Prompt (Admin).
Pịnye iwu na-esote na cmd wee banye banye nke ọ bụla:
3.Ka ka iwu DISM gbaa ọsọ ma chere ka ọ gwụ.
4. Ọ bụrụ na iwu ahụ dị n'elu adịghị arụ ọrụ wee gbalịa n'okpuru:
Mara: Dochie C: RepairSource Windows site na ọnọdụ ebe nrụzi gị (Windows Installation or Recovery Disc).
5.Rụgharịa PC gị ka ịchekwaa mgbanwe ma hụ ma ị nwere ike Idozi Ọrụ Nnyefe Echiche Intelligent Na-efu site na windo ọrụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị mgbe ahụ gaa n'ihu na-esote usoro.
Mara: Gbaa mbọ hụ na ndabere ndekọ , ọ bụrụ na ihe agahie.
1. Gaa ebe a na ibudata faịlụ ndekọ.
2. Right-pịa faịlụ ma họrọ Gbaa dịka Onye nchịkwa.
3.Ọ ga-ajụ maka ikike ka jikota faịlụ, pịa Ee n'ihu.
4.Rụgharịa PC gị ka ịchekwaa mgbanwe yana ọzọ Malite BITS site na ọrụ.
5.Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ya wee soro Usoro 1 & 2.
6. Malitegharịa ekwentị gị na PC.
Ọ bụ ya na ị nwere ihe ịga nke ọma Idozi Background Intelligent Nyefee Service Na-efu ọrụ windo ma ọ bụrụ na ị ka nwere ajụjụ ọ bụla gbasara post a nweere onwe gị ịjụ ha na ngalaba nkọwa.
ojiji chrome dị oke elu
windo 10 melite igwe anaghị arụ ọrụ
radeon usu ngwa akwụsịla na-arụ ọrụ windo 10
jiri aka nyochaa maka mmelite windo 10
windo 10 atụmatụ melite 1803 dara